Daawo: Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaashaandhiga oo maanta Xilka kala wareegay Wasiirkii hore. | Entertainment and News Site
Home » bulshada » Daawo: Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaashaandhiga oo maanta Xilka kala wareegay Wasiirkii hore.
Daawo: Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaashaandhiga oo maanta Xilka kala wareegay Wasiirkii hore.
daajis.com:- iyadda oo ay wali Magaalada Muqdisho ka soconayaan Howlaha ku aadan xil wareejinta wasaaradaha Cusub ee Dowladda cusub iyo Dowladii hore ayaa maanta waxaa xilka la wareegay wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaashandhiga Somalia Gen C/rashiid Cabdullaahi Maxmed.
Munaasibad si heer sare ah loo soo Agaasimay oo ka qabsoontay xarunta Wasaaradda Gaashandhiga Somalia ayaa waxaa xilka kula kala wareegay wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaashaandhiga C/rashiid Cabdullaahi Maxmed iyo Wasiirkii hore Gen Diini.